Aogositra 15, 2018 Admin
Okrainiana mikasa ny manaiky ny manam-pahefana toy ny ara-bola cryptocurrency-pananana
Okraina dia mety ela dia manaiky cryptocurrency toy ny ara-bola-pananana. Ukraine parlemanta mikasa ny hanaraka ny rafitra ara-dalàna avy ny taona toy, araka ny tatitra avy amin'ny Lohan'ny-pirenena sy ny Fiarovana Stock Market Vaomieran'ny Ukraine Timur Khomaev. Ny manam-pahefana resahina cryptocurrency ho toy ny fitaovana ara-bola, raha nanamarika fa tsy azo heverina ho toy ny ara-dalàna fitiavana. "Izao no bebe kokoa tahaka ny mizara, fatorana, promissory-tsoratra. Tsy mihevitra ny hanome fankasitrahana ho cryptocurrency ara-dalàna ho toy ny ara-bola-pananana sy hamela ny olona mba mampiasa vola ao ary mampiasa ireo fitaovana ara-bola.”
Nilaza izy fa Swiss, Dikanteny sy ny manam-pahefana Gibraltarian manaraka izany “-pananana ara-bola” famaritana. Araka ny Khromaev, Kiev dia tokony hamorona tsara ny toe-piainana ho an'ny fampandrosoana ny tsena ihany koa cryptocurrency. koa, dia mihevitra fa ilaina ny hanery hetra amin'ny cryptocurrency sy hanome hery manokana andrim-panjakana sasany ny fandrindràna sehatra ity.
Messaging goavana LINE nandefa $ 10m tahirim-bola antoka barotra
Anarana hafatra goavana LINE dia nandefa famantarana barotra tahirim-bola miaraka amin'ny fanoloran-tena ny Renivohitra $10 tapitrisa ny vao haingana tao amin'ny sampan'ny orina antsoina hoe unblock Ventures. Ny varotra ampahibemaso orinasa nilaza fa mikendry ny vola amin'ny blockchain startups ao, mba hanosika teknolojia fampandrosoana.
LINE vondrona nilaza fa manantena ny hampitombo ny tontalin'ny ny famatsiam-bola amin'ny ho avy miorina amin'ny fampandrosoana ny orinasa blockchain. Ankehitriny fandefasana avy 1 volana taorian'ny cryptocurrency nanomboka niasa ny sehatra varotra, Bitbox. Avy LINE namany Sary “Ny fandefasana io tahirim-bola antoka orinasa vaovao, LINE dia mikendry ny hampitombo ny fampandrosoana sy ny fananganan-jaza ny cryptocurrencies sy ny teknolojia blockchain. Toy izany, LINE dia iray amin'ireo orinasa varotra ampahibemaso voalohany amin'ny fomba ofisialy antoka ny fampiasam-bola amin'ny alalan'ny orinasa tahirim-bola.”
$222M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Blockchain News 13 Janoary 201...
Previous Post:Blockchain News 14.08.2018
Jo Hodor hoy i:
Aogositra 29, 2018 amin'ny 8:48 AM
Qiana Vessels hoy i:
Septambra 4, 2018 amin'ny 4:33 PM